AutoSEO vs FullSEO: Waa kuwee Semalt SEO Adeegga ay tahay inaad Xulo?
Kordhinta Mashiinka Raadinta waa mawduuc adag. In kasta oo meherad waliba ay hadda ku tiirsan tahay SEO si ay ururkooda u hormariso indhaha indhaha midig, waa run in kaliya in yar oo injineero ah ayaa si sax ah u og waxa Google iyo matoorrada kale ee waaweyn ee raadinta ay rabaan. Si loo ilaaliyo heerka garoonka ciyaarta, furayaasha furashada mashiinka raadinta ayaa ah qarsoodi dhawrsan.
Tani waxay ka dhigan tahay in aaladda SEO-ga iyo waxqabadka ugu wanaagsan aan lagu salayn tilmaamo ay bixiso Google, laakiin la tijaabiyo waxa shaqeynaya iyo waxa aan shaqeyn. Inta badan ee aad ka shaqeyso kobcinta mashiinka raadinta, waxaa kuu caddaanaya waxa la doonayo, baahiyaha iyo doorbidayaasha matoorrada raadinta weyn ayaa noqonaya.
Semalt waxaan ku isticmaalnay 10 sano anagoo xiiseyneynay xirfadaheena SEO. Waxaan hadda falanqeynay ku dhawaad 1.5 milyan oo websaydh waxaanan ku faanaynaa 600,000 oo isticmaaleyaal diiwaangashan. Waxaan si qoto dheer u fahamsanahay waxa ay ku qaadaneyso in la helo ururkaaga kaliya maahee mid ka mid ah bogga Google, laakiin illaa heerka ugu sarreeya. Tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaan si aad ah uga shaqeynay sidii aan u noqon laheyn bixiyaha SEO-ga ee xulashada dhowr urur oo hogaamiya.
Laakiin waa kuwee mid ka mid ah adeegyadeena SEO ee aad dooran lahayd? Maanta waxaan eegi doonaa xirmadayada AutoSEO iyo FullSEO ; kala duwanaanshaha, waxyaabaha ay isla egyihiin, iyo sida loo garto xulasho adiga kugu habboon.
Waa maxay AutoSEO iyo FullSEO?
Waxyaabaha ugu horreeya waa maxay: maxay yihiin dhab ahaan AutoSEO iyo FullSEO?
Heer ballaadhan, AutoSEO iyo FullSEO waa laba wax soo saar oo ujeedadoodu tahay inay isku fillaadaan: kobciyaan websaydhka si aad u hagaajisid darajaynta mashiinkaaga raadinta. Waa alaabooyin aan Semalt ku horumaarnay guri-guri, mid walbana wuxuu ka faa'iidaystay ganacsiyada ku dhowaad waddan kasta oo adduunka ah.
Laakiin marka loo eego iskumiddan asaasiga ah, alaabooyinka waxay bilaabaan inay kala baxaan.
AutoSEO waa qalab xariif ah oo otomaatig u ah oo matalaya xirmada heer-gelinta. AutoSEO waxaa loogu talagalay qof kasta oo qaadaya tallaabooyinkooda ugu horreeya adduunka SEO oo adeegsanaya adeegsigiisa.
FullSEO waa xirmadayada SEO oo dhameystiran. Waxaa loogu talagalay qof kasta oo diyaar u ah inuu si buuxda u qiimeeyo mashiinka raadinta wuxuuna raadinayaa natiijada ugu fiican, dhaqsaha badan iyo ugu dheer ee ugu dheer. Waad nooga bixi kartaa kor u qaadista culus oo dhan, maadaama isticmaaleyaasha FullSEO ay marin u helayaan kooxdeena khubarada SEO.
Aynu si dhow u eegno xalkaan, oo aan si sax ah u eegno sida mid walbaa u shaqeeyo.
Ma waxaad dooneysaa inaad kordhiso aragtida astaanta iyo iibka? Miyaad qaadaysaa talaabooyinkaaga ugu horreeya adduunyada kobcinta mashiinka raadinta? Ma waxaad dooneysaa inaad aragto natiijooyinka qaar ka hor intaadan gelin maalgashi ballaaran?
AutoSEO ayaa laga yaabaa inay adiga wax soo saarkii kuu noqoto.
Xirmooyinka 'Semalt's AutoSEO' waxaa loogu talagalay ganacsatada doonaya inay kordhiyaan taraafikada goobta, laakiin aan dooneynin inay maalgashadaan dallacsiinta bogga marxaladda koowaad, ugu yaraan illaa ay ka arkaan natiijooyinka dhabta ah. AutoSEO wuxuu kugu gelinayaa kursiga darawalka, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad biloqdo ololeyaasha SEO-ka waxyar oo ah $ 0.99 US.
Sidee ayey u shaqaysaa AutoSEO?
Aynu eegno burburka sida saxda ah ee loo yaqaan 'AutoSEO'.
Diiwaangelinta: Waxaad ku bilaabaysaa hawsha adigoo buuxinaya foomka fudud ee isdiiwaangelinta AutoSEO.
Falanqaynta bogga: Websaydhkaaga ayaa la falanqeeyey, iyo AutoSEO waxay soo sheegi doontaa sida wanaagsan ee ay mareegtaadu wax uga qabatay marka loo eego dhismaha websaydhka iyo heerarka warshadaha SEO.
Horumarinta istiraatiijiyadeed: La shaqeynta mid ka mid ah khubaradeena sare ee SEO, maamulahaaga Semalt wuxuu maareyn doonaa falanqayn dhameystiran oo ku saabsan websaydhkaaga, wuxuuna abuuri doonaa liis khaladaad iyo isku dheelitir la'aan u baahan in la xaliyo.
Hirgalinta talooyinka warbixinta: Mar alla markii nala siiyo maamulaha wareejinta faylka (FTP) ama marinka gudiga maamulka CMS, injineeradayadu waxay hirgalin doonaan talooyinka la soo jeediyay si loo dammaanad qaado olole guuleysta AutoSEO.
Daraasad keyword: Injineer SEO ah wuxuu abuuraa liis ay ku jiraan ereyada furaha ah ee lagu dari doono websaydhkaaga, oo loo xushay inuu kordhiyo iibka iyo taraafikada.
Dhismaha isku xidhka: AutoSEO waxay bilaabaysaa gelinta isku xidhka dabiiciga ah ee ka yimaada iyo ka imanaya ilaha lagu kalsoon yahay ee boggaaga oo dhan, iyadoo la kordhinayo aragtida mashiinka raadinta. Semalt waxay leedahay macluumaad keyd ah oo kabadan 50,000 oo goobood oo tayo sare leh, iyo xiriiriyeyaal la xushay oo ku saleysan da'da domain iyo TrustRank. Dhismaha isku xirka waxaa lagu qabtaa xawaare lagu cabiro cabirka soosocda: 10% isku xirka magacyada astaanta, 40% xiriiriyeyaasha xirmooyinka, 50% xiriidhada aan xirxiran.
Raadinta ololaha: Guusha ololahaaga waxaa lagu socdaa iyada oo loo marayo casriyeyn qiimeyn maalinle ah ee liiska eraybixinta la dalacsiiyay.
La socodka joogtada ah: AutoSEO wuxuu sii wadaa inuu la socdo horumarka ololaha, isagoo warbixin ka siinaya emaylka ama nidaamka ogaysiiska gudaha.
Ayaa loogu talagalay AutoSEO?
AutoSEO waxaa loogu talagalay kuwa raba inay waxbadan ka bartaan SEO ka hor intaysan sameynin maal gashi weyn. Waxaa loogu talagalay tijaabiyaasha iyo kuwa hooseeya ee jecel daahfurnaanta iyo xakamaynta. Waxaa loogu talagalay qof kasta oo doonaya inuu ku bilaabo safarkooda SEO hab qaali ah oo wargelin ah.
Ma rabtaa inaad noqoto waxa ugu fiican? Miyaad fahamtay qiimaha kobcinta mashiinka raadinta, oo waxaad dooneysaa xalka ugu dhameystiran uguna waxtarka badan ee suurtogalka ah? Miyaad dooneysaa inaad maal gasho koox la xaqiijiyay oo bixin kara natiijooyinka ugu wanaagsan ee suurtagalka ah?
FullSEO waa xirmada saxda ah.
FullSEO waa Rolls-Royce of Semalt ee SEO-yada. Waa xallin isku dhafan oo leh istiraatiijiyad dhameystiran oo SEO ah oo xudunta u ah. Waxaad ka heshaa falanqayn qoto dheer khabiirada hogaaminaya warshadaha, kaliya maahan boggagaaga, laakiin bogagga tartamaya iyo sida ugu fiican ee ay shirkaddaadu u shaqeyso. Waxay u shaqeysaa si dhammaystiran, farsamooyin la xaqiijiyey oo SEO ah, waxayna bixisaa horumarin deg deg ah koox khubaro Semalt ah oo xiriir joogto ah la yeelan doona. Xirmadan ayaa dammaanad ka qaadaysa kobaca taraafikada ee websaydhka iyo sarrifka sare.
Sidee buu u shaqeeyaa FullSEO?
Xidhmada FullSEO waxaa loo kala qaybin karaa afar qaybood oo waaweyn: falanqayn, kobcinta gudaha, dhismaha isku xidhka iyo taageerada.
Falanqayn qoto dheer waxaa samayn doona koox khubaro Semalt SEO ah iyo maamulahaaga Semalt shaqsiyeed. Falanqayntaani waxay daboolaysaa:
Aqoonsiga ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee soo jiidan kara dhagaystayaasha ugu weyn uguna badan ee suurtagalka ah.
Falanqaynta qaab dhismeedka websaydhka iyo qaybinta ereyga ereyga si loo arko sida ay ula jaanqaadi karto habdhaqanka ugu wanaagsan ee SEO iyo xulashada bogagga shabakadda ee diiradda saari doona dardargelinta websaydhka.
Uruurinta macluumaadka ku saabsan boggaga internetka ee tartamayaashaada iyo kuwa hodanka ah si loo gaaro darajada ugu sarreysa ee suurtagalka ah ee Google.
Marka falanqaynta la dhammaystiro, kooxda khubarada SEO, ee ka shaqeeya lashaqeeyaha soosaaraha websaydhka Semalt, waxay sameyn doonaan kobcinta gudaha ee shabakadaada si ay ula jaanqaadaan shuruudaha qiimeynta mashiinka baarista isla markaana ay ka takhalusaan wixii qalad ama caqabado ah ee kugu hayn kara. dib. Wejiga kobcinta gudaha ayaa ka hadli doona:
Abuurista calaamadaha meta iyo calaamadaha alt oo ku saleysan falanqaynta ereyga hore.
Kobcinta iyo kobcinta bogga HTML-ka iyo gelinta astaamaha lagama maarmaanka ah.
Tafatirka robots.txt iyo .htaccess files si websaydhku ugu soo bandhigo matoorada raadinta sida ay tahay. Abuurista faylka barta shabakadda si loogu helo tilmaan dhammaystiran bogagga shabakadda.
Ku dhejinta badhamada warbaahinta bulshada websaydhka si loo hagaajiyo ka-qaybgal.
In kasta oo loo tixgelin karo inay tahay qayb ka mid ah hannaanka kobcinta gudaha, dhismaha isku xidhka ayaa muhiim u ah inuu isagu iskiis u noqdo tallaabo. Inta lagu jiro dhismaha isku xidhka, kooxdeena khubarada SEO waxay:
Falanqee shabakada 'juice juice' ee websaydhkaaga (qiimaha mashiinka raadinta ama sinnaanta wuxuu ka soo gudbay hal bog bog kale).
Xir xiriiriyeyaal dibadeed oo aan loo baahnayn ama aan waxtar lahayn si aad u ilaaliso tayada websaydhka.
Aqoonso meelaha ugu wanaagsan ee lagu dhejiyo xiriiriyeyaasha cusub, ee wax ku oolka badan.
Abuur casiir iskuxiran oo caan ah oo loo baahan yahay si loo gaaro meelaha ugu sarreeya ee Google. Tan waxaa loo sameeyaa iyada oo lagu dhex darayo iskuxirka tayada leh oo ka kooban maaddada u gaarka ah ee laxiriirta maaddadaada si kor loogu qaado waxtarka xayeysiintaada.
Cinwaanka Khaladaadka 404 farriimahana ka saar xiriiriyaha jaban.
Kama dambaysta laakiin siyaabo badan, shayga ugu muhiimsan ee halxiraalaha FullSEO waa taageerada joogtada ah ee uu bixiyo maamulahaaga Semalt shaqsiyeed. Maamulahaaga ayaa kormeeri doona horumarka ololahaaga fullSEO maalin kasta, samaynta dib-u-habeyn iyo ku dhejin doona tallaabo kasta oo jidkaaga ah. Maamulahaagu wuxuu:
Bixi warbixin maalinle ah ama codsi ah oo ku saabsan horumarka ololaha.
Kuu oggolaanayaa inaad marin u hesho xarunta warbixinta halkaas oo aad uga baari karto falanqaynta ololeha faahfaahsan.
Kumaa loosoosaaraa 'fullSEO'?
FullSEO waxaa loogu talagalay qof kasta oo diyaar u ah inuu si qumman u qaato mashiinka raadinta si dhab ah, ha ahaado mid caalami ah ama ganacsi yar oo maxalli ah. Waa xirmo dhammaystiran oo kuu oggolaanaya inaad ka mid noqotid sida ugu habboon ama gacan-qabad la'aan ah sida aad rabto. Haddii aad raadineyso inaad kordhiso taraafikada boggaaga, heerkaaga beddelka ama si fudud shirkadda ugu hooseysa, ma jirto qalab ka wanaagsan oo la heli karo.
AutoSEO vs FullSEO: wicitaanka
Wali ma hubin xirmada aad dooraneyso?
Hal ikhtiyaar waa inaad ku bilowdo safarkaaga 14 maalmood, majiro tijaabo waajib oo ah AutoSEO kaliya $ 0.99. Haddii aad dareento inaad rabto wax intaa ka badan, waxaad si fudud ugu beddeli kartaa fullSEO!
Ikhtiyaar kale ayaa ah in la maqlo waxa ay macaamiisheenu ka leeyihiin waxa ku saabsan xulasho kasta. Fiiri bogga marqaatigayaga macmiilka wixii ku saabsan aragtiyada ku saabsan sida ay ururada kale dareemayaan xirmo kasta - faa'iidooyinka, qasaarooyinka iyo waxyaabaha laga fikiro.
Dhamaadka maalinta, dhib kasta oo aad doorato, waxaad ku kalsoonaan kartaa in labadaba websaydhkaaga iyo ururkaaga guud ahaanba ay ugu fiicnaan doonaan. Darajayn Google oo hagaagtay, gaadiid badan, isbedel sarreeya iyo qadka hoose ee ka wanaagsan dhammaan inta la gaari karo.
Ma jiro waqti lagu khasaariyo. La xiriir kooxdayada saaxiibtinimo maanta!